2 taona 1 volana lasa izay #570 by harrislarry1946
Fiarahabana ................. EFA mba nieritreritra ny fanaovana DC8 Download ??
2 taona 1 volana lasa izay #571 by Gh0stRider203
ankehitriny fa ho mamy. Misy vitsivitsy avy any, na freeware sy payware Eny fa ny anankiray avy Rikoooo ho tsara
2 taona 1 volana lasa izay #573 by harrislarry1946
Mety ho tsara indrindra raha toa ka natao tamin'ny onjam-peo ny asa izany.
Ataoko indrindra ny manidina ao amin'ny IFR FS2004 toe-piainana sy ho tia ny 757 fankalazana Version fa
tsy afaka nametraka ny onjam-peo ho an-trano ao amin'ny Vor na ILS ..... lottta izay manao tsara.
Raha manao DC8 dia ho tsara ny manana ny namelatra dikan.
2 taona 1 volana lasa izay #578 by Gh0stRider203
I mirona hanao lava-entana ny fipetrany ka izaho irery ihany no IFR ny maka-eny / fipetrahana raha tsy maintsy. Tsy manana fotoana mba hipetraka ny Monitor ATC. Tsy lazaina intsony ny sasany amin'ireo nanao ny sidina hatao nandritra ny alina ary kinda hahazo izany zavatra izany ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe matory, ary avy eo LOL